ဧပြီလ (၃၀)ရက်နေ့ ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ် (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု) မြန်မာ 
🌟 ဧပြီလ (၃၀)ရက်နေ့ ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ် (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု) 🌟
၃၈ ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲအတွက် ထီစာအုပ် ၂၇၉၇၉၈ အုပ်ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီး ယခင်လရောင်းချရမှုထက် ထီစာအုပ် ၁၅၀၀၀ ကျော် လျော့နည်းသည့် နောက်ဆုံးရညနေခင်းသတင်း (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု) လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများနှင့် လယ်ယာစီးပွားအခြေခံ စက်ရုံအလုပ်ရုံများတည်ဆောက်နိုင်ရန် တောင်သူတစ်ဦးချင်း ကျပ်သိန်း ၇၀၀ အထိ ထုတ်ချေးလျက်ရှိဟုဆို တရုတ်မြို့တော်ပေကျင်းရှိ ချောင်ယန်းရပ်ကွက်တွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူများပြားနေသဖြင့် အာဏာပိုင်များက တင်းကျပ်သော အစီအမံများချမှတ် အင်ဒိုနီးရှားတွင် ရွှေတွင်းပြိုကျပြီး အမျိုးသမီး ၁၂ ဦး သေဆုံး လိဒ်စ်အသင်းကို သစ္စာဖောက်ပြီး မန်ယူသို့ကယ်ဗင်ဖီးလစ် ပြောင်းမည်မဟုတ် Zawgyi ျဖင့္ ဖတ္ရန္ ၃၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလသိန္းဆုဖြင့္ပြဲအတြက္ ထီစာအုပ္ ၂၇၉၇၉၈ အုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ၿပ�... :::: ติดตามคลิปใหม่ๆ ได้ที่ช่องยูทูป >> Eleven Broadcasting >> [ลิงค์เว็บ คลิกทีนี่!!]
( 582 หน้า ) :: 1234567 8910 11 ▶️ ⭕️
Viwer တွေကို တုန်လှုပ်သွားစေတဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ် live ဗီဒီယိုဖိုင်များ😱😱😱 [ 🔥0👀 ]
သင်ကိုယ်တိုင် သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ကို ခံစားစေမဲ့ ထိတ်လန့်ဖွယ် ဗီဒီယိုဖိုင်များ😱😱😱 [ 🔥0👀 ]
ဘုန်းကံကြီးတဲ့ လူသားတွေ မမြင်သင့်တဲ့ နာနာဘာဝပုံရိပ်များ😱😱😱 [ 🔥0👀 ]
အင်တာနက်ပေါ်က လူပြောများနေတဲ့ ထိတ်လန့်စရာအကောင်းဆုံး နာနာဘာဝဖြစ်ရပ်ဆန်း😱😱😱 [ 🔥0👀 ]
ဇွန်းကိုသုံးပြီးလှိုဏ်ခေါင်းတူးကာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဦးဆောင်ထောင်ဖောက်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်ကား😱😱 [ 🔥0👀 ]
ဆရာက ဇာတ်ညွှန်း တွေ ကို အများကြီးဖတ်ခိုင်းတယ် ဆိုတဲ့ ကလေး သရုပ်ဆောင် ရွှေဝတီစံ [ 🔥0👀 ]
စက်သုံးဆီများကို SME စက်သုံးဆီဆိုင်ငယ်များအတွက် ရောင်းချပေးနေပြီး ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် [ 🔥0👀 ]
တတ်သစ်စ အနုပညာရှင်တွေ နဲ့ ရိုက်ဖို့စီစဉ် လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ ဒါရိုက်တာ ပွင့်သိင်္ဂီဇော် [ 🔥0👀 ]
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင် လမ်းတွင် ၂၂-ဘီးတပ်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး အရှိန်လွန် တိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ [ 🔥0👀 ]
မေလ (၂၄)ရက်နေ့ ညနေခင်းသတင်းအစီအစဉ် (တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု) [ 🔥0👀 ]
ทำนายดวงของท่าน วันนี้ยังคงยุ่งยากลำบากใจ หรือเกิดวุ่นวายในสายงานและความเป็นอยู่ อาจกินได้แต่นอนไม่หลับ กับปัญหาเรื่องเก่า เรื่องใหม่ ﻿ แฟนชอบหึงหวงในเรื่องไม่เป็นเรื่อง เดินทางไปไหนต้องระวังอันตราย พยายามเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจที่ยังอ่อนล้า มีโอกาสจะเจอคนที่มีผลต่อชีวิตในวันนี้ คือกลุ่มคนประเภท หัวสมัยใหม่
26/ 05 / 2022 - 23:40
🔺 เพลงเพราะๆฟังยาวๆเป็นชั่วโมง 🔺 中国-香港-台湾 🔺 การเรียนรู้ 🔺 แผนที่ระดับน้ำทะล 🔺 สูตรขนม 🔺 คำคม แคปชั่น แท๊กโพสต์ 🔺 ישראל 🔺 เกมส์และของเล่น 🔺 ข่าวกีฬา 🔺 ดาวน์โหลดแอปและโปรแกรมฟรี 🔺 เทรนด์ทวิต 🔺 บิทคอย เทรดเหรียญดิจิตอล bitcoin 🔺 อบต. 🔺 ท่องเที่ยวและที่พักแนะนำ 🔺 นักลงทุนและธุรกิจ 🔺 ช่องยูทูป⭐️ ข้อมูลอาเซียน 🔺 เรื่องลี้ลับ ผี วิญญาน 🔺 ข่าวเด่น ประเด็นดัง 🔺 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 🔺 แบบทดสอบ ข้อสอบ ความรู้ วัดผล ออนไลน์ ฟรี 🔺 โทรศัพท์มือถือ 🔺 แคปชั่น คำคม ใหม่ๆ โดนๆ เด็ดๆ 🔺 عرب 🔺 สารคดี 🔺 สูตรอาหาร 🔺 สควิดเกม 🔺 รายการน่าสนใจ 🔺 ดวงและโหราศาสตร์ 🔺 ข่าวไอที 🔺 เพลงเกาหลี KPOP 🔺 ช่องติ๊กต๊อก 🔺 World of USA 🔺 BNK48 🔺 ប្រទេសកម្ពុជា 🔺 เกมส์ 🔺 รีวิว 🔺 ดูหนังHD Official ลิขสิทธ์ 🔺 เพลงฮิตๆดังๆใหม่ๆ 🔺 🔺 ขายของออนไลน์และอาชีพ 🔺 ละคร ดารา บันเทิง 🔺 日本語 🔺 เฟสบุ๊คและยูทูป 🔺 แต่งรูปภาพและปรับโทนสี ⭐️ ช่องyoutubeล่าสุด 🔺 🔺 Indonesia 🔺 CGM48 🔺 Việt Nam 🔺 France 🔺 မြန်မာ 🔺 Malayu 🔺 ดูดวงฟรี 🔺 한국 소식 🔺 ตัวอย่างหนัง Official Trailer 🔺 รวมประวัติ 🔺 โรงเรียน 🔺 ไม้ด่าง กล้วยด่าง บอนสี